/Blog/garari/Nzira yekuita testosterone enanthate homebrew mu 6 matanho
Posted on 05 / 07 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
Zvose zvine testosterone enanthate powder
1. Chii chinonzi testosterone enanthate
2. Chii chinonzi Testosterone enanthate chinoita mumuviri wako
3. Nzira yekuita Testosterone Enanthate homebrew nhanho
5. Tanga yako steroids homebrew kubva ku Testosterone
Ichi chinyorwa chinopa tsanangudzo yakajeka yekuti ungaita sei testosterone enanthate homebrew. Icho chinojekesawo Testosterone Enanthate inobatsira.
Chii testosterone enanthate
Nekucheka muviri kunowedzera kuve kwakakurumbira, vanhu vanogara vakatarisira chimwe chinhu chinogona kuvabatsira kuti vawane zvakakosha kupfuura vamwe. Muenzaniso wekubatsira kwakadaro isuprostoneone enanthate ndiyo imwe yepestrosterone steroids yakashandiswa zvikuru. Izvo zvose an androgen uye Anabolic steroids.
Kunyange zvazvo yakarambidzwa kuti ishandiswe, inoramba ichive imwe yeainyanya kutsvaga steroid ne bodybuilders. Hazvisi izvo chete zvinobatsira kuvakwa muviri asi zvakare kunobatsira kune avo vanorishandisa mushonga mune testosterone replacement therapy, kune avo vanotarisana nevakadzi reassignment uye mukurapa kwe hypogonadism.
Chii chinonzi Testosterone enanthate chinoita mumuviri wako
Testosterone Enanthate yakaratidza kuti inobatsira mukugadzirisa mhuka inobereka nekukurumidza muviri kuzorora. Nokuwedzera kubudiswa kwemapuroteni, inobatsira maviri acho achiwana nokukurumidza kunyange mushure mekushanda zvakaoma mukurovedza muviri. Somugumisiro, unogona kushanda zvakaoma uye kuona zvakaguma zvebasa rako kunze.
Kuderedza mumuviri wemafuta
Kunyange zvazvo vanhu vazhinji vanogona kunzwa sokuti vari kurarama zvakakwana, kwete kudya zvakawanda uye kwete kurasikirwa nemafuta emuviri avo vanoda kurasa, Testosterone Enanthate yakaratidza kuti inoita zvakanaka. Zvinoshamisa ndezvokuti kana iwe uri muumbi wemiti, haungarasikirwi nemutsipa wako asi mafuta asingaoneki anovanza.
Izvi zvinorevei kuti iwe unowana kuchengetedza mishonga yako, uye kunyange zviri nani ivo vanowana zvakawanda zvinotsanangurwa. Mafuta mashoma emuviri achaita kuti iwe urambe wakagadzikana uye urarame hupenyu hurefu.
Kuwedzera kwemisasa mashoma
Kana iwe uri chivakwa chemuviri, iwe uchakoshesa chokwadi chokuti testosterone enanthate Kuvaka muviri muviri kwakakwana. Inobatsira rimwechete nekuwedzera yeropa rekushandiswa kwemasero mumapfupa emapfupa. Testosterone enanthate inodzivirirawo cortisol chaiyo, hormone inoshanda kuburikidza nekugadzirisa misi miviri zvichidaro inotungamirira pakurasika kwayo.
Kuti uwedzere zviyero zvakakura, unofanirwa kuwana humwe simba. Chimwe chezvikonzero izvo vazhinji vanoita muviri vese vanoita chero chinhu kukudziridza simba ravo ndechekuti inobatanidzwa nevakawanda zvakakosha mumusasa wemasumbu. Testosterone enanthate ndechimwe chezvakanaka zve steroid iyo inobatsira iwe kuvaka simba rinokubatsira kuti usimudze uremu hwaunogara uchitsvaga.
Nzira yekuita Testosterone Enanthate homebrew nhanho
Kuita yako pachako homebrew Testosterone Enanthate zvinogona kunge zviri nyore kana zvakaoma, nzira yaunosarudza kuva nayo. Vanhu vakawanda vanogona kukuodza mwoyo nehana yakawanda mukati maro, asi tichazvipa zviri nyore. Hezvino izvo zvinotarisirwa uye nhanho nhanho-nhungamiro yekuti iwe unogona sei kuparadzira Testosterone Enanthate;
Testosterone Enanthate powder: 62.5 gramu
Testosterone Enanthate: 250mg pam ml
Benzyl doro (BA): 5ml (2%)
Mafuta akanyorwa: 148.13ml
Gumi rinogadzira Mhuka imwe neimwe ine 10 ml (Zvose zvakagadzirirwa zvinofanira kunge zvine kapu, gadziri rerabhu, uye chidimbu.)
20mL / 60 ml seringe ine 18-21 inonzi nzere.
3mL seringiri ne 18-21 inonzi nete
Glass Rod uye 100mL Beaker
Zvidimbu zviduku zvepepa
A digit digital (+ -0.1 kana 0.01)
Danho 1: Shandisa testosterone enanthate powder.
Nhanho 2: Wedzera poda, BA, uye BB mu beaker
Nhanho 3: Shambidzai beaker mumubhedha wemvura
Danho 4: Wedzera mafuta akabatanidzwa
Nhanho 5: Kuchenesa
Nhanho 6: Vapfekedze nevanoputika matepi
Heano matanho anotsanangurwa pamusoro pokuti zvinofanira kuitwa sei;
Danho 1: Shandisa testosterone enanthate powder
Chienzanisa Testosterone Enanthate powder kuti uone kuti uri kushandisa iyo chaiyo yaunoda kuita yako homebrew. Kuti uwane zvakananga kuyerwa, tora chiduku chiduku repepa ugoisa pachiyero.
Kuti uone kuti hauna kuisa uremu hwepa pepa paunenge uchiyera upfu, shandisa mutsara kuti uise muzinga kusvika zero. Iwe zvino unogona kuwedzera pfupfu zvishoma nezvishoma kuti urege kuisa zvakawanda zvingada kuti urambe uchibvisa.
Dzimwe nguva pfupa inogona kukura zvishoma zvokuti iwe unogona kuramba uchigadzirisa nguva dzose iwe uchida kuwedzera. Nzira yakanakisisa yekunyadzisa ndeyokuwedzera pfupfu shoma uye pfuurira pachiyero uchishandisa munwe wako uye tendera kuti nhamba ikwereke pasi. Kana uchinge wanyatsoziva kuti wakayesa zvidimbu zvako zvema 25 zvakarurama, ikozvino wakanaka kuenda. Simesa Testosterone Enanthate powder kuti uve nechokwadi chokuti uri kushandisa iyo chaiyo yaunoda kuita yako homebrew
Isa chiyero chakaiswa pasi mubheki.
Wedzera 2ml yeBenzyl Doro uye 2ml Benzyl Benzoate.
Basa guru rekuwedzera Benzyl Doro nderokuita sendimba inopisa. Iyo inoshandawo zvakanaka sevhisi saka iko kuchengeta mafuta ose neupfu munzvimbo imwechete. Benzyl Doro isiriwo rinoshandiswa zvakanyanya, uye iyo inobatsira nayo ndeyokuti inobatsira pakune jekisi isina kurwadza.
Iyi danho inofadza, asi kana iwe uchida kuti chirongwa chibudirire zvakanaka, saka haufaniri kuchiputsa. Tora hari ugozadza nayo ne inch inch of water. Zviise pachinzvimbo chekupisa, semuenzaniso, sitofu uye uite kuti ipise.
Tora pani ugoisa beaker mariri. Isai pani mumamita mashoma emvura. Ramba wakatarira pfupfu uye wotarisa sezvo inopera kusvikira yava kuda kusvika. Chinhu chakajeka chinogadzirisa chinoreva kuti musanganiswa iko zvino wakanyunguduka.
Zvose izvi zvinobatsira pakupedza pfupa zvachose kupinda mumagetsi. Enda kune rimwe danho rinotevera apo pasina poda inoratidzika.
Mirira kuti concoction itonhorere pasi zvishoma uwedzere mafuta akaiswa mairi. Iwe unogona kuzvidziya kuti uite zvishoma kuti unyatsorodza nyore.
Muchero wemafuta mbeu ndiyo amai vemamwe mafuta ose anoshanda sevatakuri. Chii chinoita kuti zvive nani pakushandiswa kune vamwe ndezvokuti inonda uye ine anesthetic properties. Uyewo, inobatsira kugadzirisa zvisikwa zvakakanganisika uye kuenzanisa zvose zvine utano kwauri! Iwe haungatamburi kubva kune zvinokonzerwa nemagetsi anokonzerwa nemafuta emuzambiringa mazambiringa.
Nhanho inotevera yaunofanirwa kutora ndeyekugadzira mhinduro mune sirinji yaunoshandisa kusefa nayo. Iwe unogona kushandisa sirinji hombe kana diki uye wosarudza kudzokorora maitiro kakawanda.
Unwrap the 0.22um seringe filter kubva muhomwe yacho uye gadzirisa tsvina yegorosi pachidimbu chiduku uye shandisa sirindi. Kushandisa swab yewaini, bvisa kumusoro kwebasa rakasviba uye uise huri tsvina yakaita mairi. Isa nheyo iyo yakanamatirwa nesiriniti firimu mukati memhepo.
Iyi danho danho rakakosha zvikuru, uye steroid dzose dzakapedzwa dzinofanirwa kuenda nayo. Zvinowanzoitika kuti firiti inogona kuvharwa munguva yekutsvaira. Somugumisiro, iwe uchacherechedza kuti nzira yacho inononoka zvikuru. Kuti udzivirire izvi, shandura firati yacho neimwe itsva kukuchengetedza marwadzo ekufanira kuramba wakamirira.
Iwe, zvisinei, unofanira kuziva kuti nguva yakatorwa kufuta mhinduro inobva pane steroid uye mg mg / ml wechigadzirwa.
Kana ukangopedzisira uchishambadzira mumvura isina kuchena, iyo yakagadzirwa yakakwana.
Isa chisarudzo chako kusarudza kushandisa flip-off caps.
Tanga yako steroids homebrew kubva ku Testosterone
Testosterone homebrew steroid ndiyo yakanakisisa yaungatanga nayo nokuti muviri wako unoziva nayo. Iyo inobudiswa mumuviri nenzira yega uye inobatsira kuti ikure, kugadzirisa uye kubudirira.
Apo maitiro e testosterone ari pasi, pane kuwedzera kwemafuta uye kuyerwa. Testosterone supplementation ndiyo nzira yakanakisisa yaunokwanisa kubudirira nayo mitambo, kutsungirira zviri nani, nemisimba yakasimba. Kana uri kuronga kugadzirisa muviri wako, iwe unofanira kufungidzira kugadzira yako homebrew steroid uchishandisa Testosterone.
Nyaya inouya nekuita yako homebrewed steroid ndeyekuti iwe haufaniri kuvimba kuti ichakupa iwe mhinduro dzaunofanirwa. Kunyangwe mushure mekutevera nzira yakarurama, uchaona kuti iwe hauna chivimbo chezvawakaita. Vanhu vazhinji vanobudisa steroid yavo vanoshandisa iyo semuedzo uye nzira yekukanganisa.
Kana iwe uine unyanzvi hwakakwana hwebhroreta, iwe haufaniri hako kubatanidzwa mune izvi nokuti zvinogona kuva nengozi kwauri. Sezvakaratidzwa munyaya iyo iwe unongoda zvigadzirwa zvema laboratory asi iwe usiri kutora danho shoma rinogona kupedzisa kukupa nyaya dzakakomba zvikuru kubva pakujoka. Izvozvo ndezvokuti kugadzirira kwe steroid homebrew kunofanira kuva isina kuchena asati inaya. Zvinoreva kuti unofanirwa kuchenjerera panguva yekugadzirira. Kusava neziso rakakosha kunogona kuita kuti uzvikuvadze iwe uchiedza kubudisa chimwe chinhu chawaigona kutenga akagadzirira.
Kuti uve nechivimbo chokuti uri kutora chirongwa chakakodzera che Testosterone Enanthate uye yehutano, unofanirwa kufunga nezvekutsvaga mari mune yekare yakagadzirwa steroid. Izvo hazvingori chete zvakachengeteka kwauri asi zvakare zvakanyanya kusununguka kushandisa.
Kushandisa yako homebrew steroids kunobatsira nekuti inobatsira pakuzadzisa zvakakosha zvako mune zvekurovedza kunze kwekuti iwe unofanira kuvhara zvakadzika muhomwe dzako. Inogona kupawo imwe nzira yakanakisisa yehutsika-steroid iyo inokurudzira vatengesi kupa mumusika. Nekapamusoro yeTesttosterone homebrew recipe yakapiwa pamusoro, iwe unokwanisa kubudisa yakagadzirwa michina yakaisvonaka.
Anabolic Steroids uye Kuzviita, Purofesa Frank, peji 1-42
Testosterone: Kuita-Kukwana-Kuchinja, Eberhard Njeschlag, Hermann M. Behre, peji 330-339
Nzira Yokusarudza Steroid Powder Suppliers mu12 Matanho Mashandisiro Ekushandisa Trenbololone Recipe Kusanganisa Trenbolone Enanthate Powder